Manaova orinasa sy mpanamboatra kosmetika amin'ny orinasa / orinasa / namboarina | Banffee Makeup
Maquillage Banffee - Ozinina fanaovana makiazy matihanina& Mpanamboatra Kosmetika namboarina
Vokatra endrika tarehy
MIJANONA ARY MANKALAZA NY HAHATAVANAO
Avelao hiparitaka manerana ny vazan-tany rehetra ny makiazy Banffee! Izahay no mpanamboatra kosmetika OEM & ODM matihanina.
Banffee Makeup dia matihaninafanamboarana orinasa ary mpanamboatra vokatra kosmetika any Shina ho an'ny karazana kosmetika maso rehetra, kosmetika tarehy ary kosmetika molotra. Ny vokatra lehibe indrindra dia ny lokomena, palette eyeshadow, eyeliners, fondation, poids, highlighter& bronzer, sns.
.Banffee Makeup no mpanamboatra kosmetika ambongadiny izay manana makiazy marika manokana ho an'ny ambongadiny ary manome serivisy OEM / ODM ihany koa.
Isika no OEM matihanina& ODM mpanamboatra makiazy, izay mametraka fikarohana sy fampandrosoana, famokarana ary fivarotana ho iray. Nahazo ny laza tsara ho an'ny fitaovana mandroso izahay, ekipa varotra matihanina, matanjaka R& D ekipa nandritra ny 10 taona mahery, ny famatsiana akora avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Banffee Makeup dia manome serivisy fanao matihanina amin'ny karazana vokatra kosmetika rehetra. Raha mitady mpanamboatra OEM kosmetika ianao dia mifandraisa aminay.
Fanontaniana:Lazain'ny mpanjifa ny anton'ny endrika irina, ny famaritana ny zava-bita, ny tsingerin'ny fiainana ary ny fepetra takiana.
Design: Ny ekipan'ny famolavolana dia mandray anjara hatrany am-piandohan'ny tetikasa iray mba hiantohana ny vokatra namboarina tsara indrindra mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa.
Fitantanana kalitao: Mba hamatsiana rafitra avo lenta dia mitazona ny fahombiazany& Rafitra fitantanana kalitao mahomby.
Ny Banffee Makeup dia manome vahaolana tokana ho an'ny marika makiazy fanombohana: manome serivisy fanaingoana feno toy ny famolavolana marika, famolavolana fonosana vokatra, famakafakana toerana misy ny tsenan'ny marika, fampivoarana sy famokarana vokatra, fanofanana fivarotana vokatra, sns.
Amin'ny maha-orinasa makiazy / mpanamboatra manana traikefa 16 taona, Banffee Makeup dia afaka manome makiazy avo lenta amin'ny vidiny mifaninana.
16 taona traikefa
Ny vokatra dia tsy tian'ny mpanjifa an-trano ihany, fa aondrana any Azia Atsimoatsinanana, Afovoany Atsinanana, Afrika, Ea...
Nahazo ny laza tsara ho an'ny fitaovana mandroso izahay, ekipa varotra matihanina.
Banffee dia afaka manome raikipohy namboarina, fonosana namboarina, famolavolana maimaim-poana, serivisy fandefasana ary serivisy aorian'ny varotra ...
Tsy misy habibiana& vegan
Ny andiany roduct dia misy alokaloka, lokomena, lipgloss, balsama molotra, volomaso, eyeliner, mascara, fondation, highlighter, c...
Guangzhou Banffee Cosmetics Co., Ltd. dia niorina tamin'ny taona 2015. Ny foibeny ary ny R&D tena ratsy dia hita ao amin'ny Jianggao Industrial Town Park, Baiyun District, Guangzhou City, izay manana manan-karena ara-kolontsaina tontolo iainana. Ny orinasa mifantoka amin'ny fampandrosoana, famolavolana, ny famokarana, ny varotra sy ny famatsiana ny teknolojia avo-makiazy, ny fampidirana ny orinasa ary manaova makiazy namboarina mpanamboatra.
Rehefa afaka 7 taona fampandrosoana, Banffee Makeup efa nahazo ISO22716, GMP, SGS, FDA certifications, ary manana ny fikarohana sy ny fampandrosoana ara-teknika ekipa, goavana GMPC famokarana atrikasa, maoderina tanteraka famokarana fitaovana mandeha ho azy, sy ny famatsiana iraisam-pirenena rojo fanafarana fitaovana manta. Ankehitriny dia lasa fanta-daza makiazy orinasa entana ao amin'ny orinasa makiazy, mivoaha ny azy KILLFE marika. Raha mitady asa sy azo antoka ka hanao ny orinasa / OEM makiazy orinasa, handray mba hifandray antsika.
16 taona ny traikefa ao amin'ny faritra Cosmetics.
Voamarina orinasa maro certifications.
Iray-mijanona fanompoana ho an'ny mpanjifa.
Ireto ny vaovao farany momba ny orinasa sy ny orinasa. Vakio ireo lahatsoratra mba hahazo fanazavana fanampiny momba ny vokatra sy ny indostria, ary dia toy izany no mahazo Fitaomam-panahy ho tetikasa. Mafy isika mino fa tsy maintsy mianatra fa ny tsara dia afaka hanatratra nampiofanina hoditra zavatra maro no mbola tsy afaka an-tsaina anao tratrarina.
Top Holiday Eyeshadow Palettes amin'ny Banffee Makeup
Ny mahavariana isan-karazany ny fialan-tsasatra amin'ny Banffee eyeshadow palettes. Ankoatra ny loko sy ny matoatoa va no tsara tarehy, misy maro ...
Banffee vokatra vaovao
--Following fototra hoditra fikarakarana ny vokatra, Banffee nanomboka multi-zavatra fototra mahaforona vokatra mba hanitatra efa misy vokatra tsipika ...
Clear Lip Liner - fitandremana ny lokomena simba Day rehetra
Toy ny isan-makiazy vokatra, mazava liners molotra manao mora kokoa ny fiainana. Inona avy ny soa ary ahoana no hisorohana smudgi ...
Ny Mahasoa ny Natural Lip gloss sy Ahoana no hifidy tsara indrindra Natural Lip gloss
#Best voajanahary glosses molotra no tena fanafody ho an'ny olombelona chapped ka vaky molotra. Tsindrio eto raha hahafantatra ny fomba mahasoa izy ireo ...
Aiza ny hametraka miloko ny Face?
Tsikelikely amin'ny hoe aiza no hametraka miloko ambonin'ny sy hampihatra ny miloko hanatsarana ny handrinao, takolany, ary ny orony ...
Iza no tsara indrindra lokomena ho an'ny Use Daily?
Hey, aoka ny mifandray!
Raha toa ka manana fanontaniana momba ny vokatra na ny tolotra,
dia aza misalasala hanampy ny mpanjifa ekipa.
Ahoana no hanaovana azy? Meet Ary Hamaritana Ny Global
Ny zavatra voalohany dia ataontsika fihaonana amin 'ny mpanjifa sy ny lahateny amin'ny alalan'ny ny tanjona amin'ny tetikasa hoavy.
Nandritra ity fihaonana, dia aza misalasala mampita ny hevitra sy manontany fanontaniana maro.
Guangzhou Banffee Cosmetics Co., Ltd. dia naorina tamin'ny taona 2015. Mifantoka amin'ny fampandrosoana, ny famolavolana, ny famokarana, ny varotra ary ny famatsiana kosmetika avo lenta izahay.
AZA MISARAKA Mifandraisa aminay
Adiresy: Room 307, Building 4, No. 4, Greenland Airport Center, Huadu District, Guangzhou